စီမံကိန်းကားများယခုပင် Beta တွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ: GAMEVIL's Racing Game | Androidsis
GAMEVIL သည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ယခင် Project Cars သို့မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်သင်၏ကားပြိုင်ပွဲသည်ယခုထုတ်ဝေမှုတွင်သင်နှင့်အတူမျှဝေရန်ဖိတ်ကြားချက်မှတစ်ဆင့် beta ထဲသို့ဝင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်နိူင်သည်။
ဒီကပြောသည် ဂိမ်းတစ်ခု Arcade ပိုဖြစ်ပါတယ် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသုံးခုသာရှိသည်။ တစ်ချက်နှိပ်ခြင်း၊ နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းနှင့်ကြာရှည်ခြင်း။ ဒီအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု (၃) ခုကဒီ Arcade ကားပြိုင်ကားဂိမ်းထဲက finish line ကနေအလျင်အမြန်ဘရိတ် (သို့) အရှိန်မြှင့် (သို့) ထွက်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ လုပ်သာလုပ်။
1 Project Cars သွား beta ကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး
2 Project Cars Go တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတိုက်နယ်စီးနင်းလိုက်ပါ
3 သင် simulation မကမ်းလှမ်းပါကအကြောင်းအရာပေးပါ
Project Cars သွား beta ကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး
ပထမဦးဆုံး စီမံကိန်းကားများ Go ၏ beta ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပါမည်:
Google Play beta ကိုလင့်ခ်လုပ်ပါ: စီမံကိန်းကားများသွားပါ
အခုတော့သာ ဂိမ်း၏ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာကိုတပ်ဆင်ခြင်းမတိုင်မီတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်သင်စောင့်ရမည် beta ကို၏။ ၎င်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာလိမ့်မည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုရရှိနိုင်ချိန်တွင် download option ကို နှိပ်၍ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုညွှန်ပြသည့်အသိပေးချက်တစ်ခုကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Project Cars Go ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြား platform များအတွက်ဂိမ်း၏ထူးချွန်မှုအပိုင်းကိုဖြုတ်ထုတ်ပေးသည့် freemium အားလုံးအထက်တွင်ရှိသည်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နားလည်လိုက်သည်၊ ၎င်းသည် arcade မတိုင်မီသွားရန်မောင်းနှင်သည့် Simulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သာသုံးခလုတ်သို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များရှိသည်.
တ ဦး တည်းအဘို့အလိမ့်မယ် အပြာရောင်မုတ်နှင့်အတူအရှိန်မြှင့်ရန်နောက်ထပ်ခလုတ်, ဇယားကွက်ကနေစတင်ပါ, နှင့်အနီရောင်ကျနော်တို့အစိမ်းရောင်ကို arc များနှင့်လွှတ်ပေးရန်ဖြတ်သန်းသွားသည်အထိအချိန်ကြာမြင့်စွာနှိပ်ရန်။ ဤသည်စီမံကိန်းကားများ Go ကိုကားမောင်း၏လမ်းဖြစ်၏ ဟုတ်တယ်နည်းနည်းအေးတယ်
Project Cars Go တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတိုက်နယ်စီးနင်းလိုက်ပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ Project Cars Go လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Arcade ဂိမ်းဟာကျိုးနပ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆားကစ်များသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည့်အကြောင်းအရာတွင်ပါဝင်သည်မှာမှန်ပါသည် Las Vegas၊ စင်္ကာပူ၊ Long Beach ရှိသူများကဲ့သို့.
ကလိုပဲ အားကစားယာဉ်များကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်း Ford နှင့် Mercedes ကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်အားလုံးမှမဟုတ်သူများသည်သင်၏ Arcade အတွေ့အကြုံကိုရက်သတ္တပတ်များစွာပျော်မွေ့ရန်တန်ဖိုးရှိသည့်အချက်များဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ငါတို့လက်ထဲကအဖြစ်အပျက်မျိုးစုံနဲ့အထိမ်းအမှတ်ကားတွေမောင်းနိုင်မယ့်အလားအလာရှိတယ် ကြောင်း Ford Mustang Fastback နှင့်အတူအစောပိုင်းဂိမ်း.
သင် simulation မကမ်းလှမ်းပါကအကြောင်းအရာပေးပါ
ဤရွေ့ကား, အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ပရောဂျက်ကားများရိုးရှင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထိုစက်များဖြင့်ထားခဲ့ပါအရေးကြီးသည့်အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံထက်ဂရပ်ဖစ်တွင်ထူးကဲစွာထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကအနည်းငယ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီးမည်သည့်အရာမျှမလုပ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုထိစရာမလိုဘဲဖြတ်သန်းသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အမြင်အာရုံကလိုပဲဖမ်းမိဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ် သူတို့အားအထင်ကရမော်တော်ယာဉ်၎င်း၏အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်၏။ သူ့ဟာသူပုံရိပ်ကအလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Project Cars Go တွင်အမြန်ဆုံးအရှိန်မြှင့်ရန်သင့်လျော်သည့်အချိန်တွင်နှိပ်ရန်သတိထားရမည်။ ပြီးတော့အဲဒီမှာနေတယ်။
စီမံကိန်းကားများ Go ကိုတိုးတက်အောင်ဆက်လက်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် beta ကိုရနိုင်သည်ကျနော်တို့ယူသောအချိန်များအတွက်ကြောင့်အတော်လေးကောင်းလှ၏။ အကယ်၍ သင်သည်ကားအမှတ်တံဆိပ်ကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်ရှာဖွေနေသောအရာအားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းတို့က simulation ကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်၊ အစစ်အမှန်တစ်ခုခုအတွက် GRID autosport ကိုသွားပါ.
၎င်းသည်သင်သော့ဖွင့်နိုင်သောအကြောင်းအရာ၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကားအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ထင်ရှားသည်။ ဒါဟာ Simulator မဟုတ်ဘဲ Arcade မဟုတ်ပါ။
စီမံကိန်း CARS GO
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ » Project Cars သည် GAMEVIL ၏ပြိုင်ကားဂိမ်းကိုယခု beta တွင်ရနိုင်သည်
လူမှုကွန်ယက်အသစ် Powder ဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများ၏ကလစ်များကို တင်၍ မျှဝေပါ